China Luxury girazi Hookah SY1010 vagadziri uye vanotengesa | Vechidiki
Luxury Girazi Hookah SY1010
Chigadzirwa Zita: Yemhando yepamusoro Shisha
Kurongedza: bhokisi remarata / chipo bhokisi kurongedza
Material: simbi chiwanikwa, girazi
Ruvara: sirivheri, inogona kuvezwa
Inesarudzo simbi isina simbi / aluminium alloy zvinhu
Chigadzirwa chesilika skrini
Kavha tsika dhizaini
Hose zvinhu: silicone / dehwe
Inesarudzo girazi bhodhoro girazi
Isu tinotengesa zvigadzirwa izvi chaizvo muEurope neRussia. Mitsara yaro inotsvedza uye ine rupo.
Iyo ine yakasarudzika esimbi mameseji uye izere nepfungwa yetekinoroji.
Kana iwe uchida iyi sitaira, isu tinokwanisa kugadzirisa zvigadzirwa zveyesimbi chikamu uye neruvara rwegirazi chikamu pane ichi chikonzero. Unogona kuve nemhando dzakasiyana dhizaini yekuita kuti chigadzirwa chioneke chinokwezva.
Pazasi pane kuratidzwa pamwe nekubatanidzwa kwezvimwe zvinhu.
Zvakafanana Models, Yakashongedzwa mameseji:
Q: Ndinogona gadzirisa magadzirirwo angu
A: Ehe, kana iwe uchiraira zvinopfuura mazana maviri seti, isu tichagadzirisa chigadzirwa cheako logo, uye iwo mashoma ehuwandu hwehuwandu hwekupakata hunopfuura mazana mashanu seti.
Mubvunzo: Ndinogona here kusanganisa mavara uye kutora zvimwe zvigadzirwa kuti ndiedze musika kutanga?
A: Tine mamwe masheya eichi. Kana iwe uchingoda shoma shoma kuti uedze pakutanga, ndapota nyorera email yedu kuti ukurukure.
Mubvunzo: Ndino vimbisa sei kugamuchira zvinhu?
A: Kuwedzera kune yakakosha kubhengi kuchinjisa uye paypal, isu tinotsigirawo wechitatu-bato repamhepo online kiredhiti inishuwarenzi nzira dzekubhadhara. Chete mushure mekuti iwe ugamuchire zvinhu, ndipo patinogona kugamuchira iyo mubhadharo.
A: Tichaongorora zvinhu zvisati zvaendeswa. Ndokumbira usayine irisiti mushure mekugamuchira zvinhu. Kana paine chero dambudziko remhando yepamusoro, ndapota taura nesu mukati memazuva manomwe uye isu tichazvishandira kuzvibata iwe.
Taura nesu neemail kuti uwane hurukuro yakadzama
Pashure: Yakasarudzika Aluminium Girazi Hookah YH-SYAL12
Zvadaro: Yakapendwa Hookah neLeather Hose
Akakora muraraungu murara simbi hookahGradient rai ...
Yakapendwa Hookah neLeather Hose
Ruvara Yakachipa Yakachipa Hookah Ine Hose
Mini Inotakurika Shisha
Aluminium Sliver Yakanaka Yemazuva Ano Hookah